မြန်မာစာ 100% မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်တဲ့ tool ထွက်ရှိ - အမျိုးကောင်းသား
Home » Android » နည်းပညာ » မြန်မာ ဖောင့်ထည့်နည်း » မြန်မာစာ 100% မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်တဲ့ tool ထွက်ရှိ
မြန်မာစာ 100% မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်တဲ့ tool ထွက်ရှိ
Android 4.1 နှင့် အထက်ဖုန်းတွေမှာ ဒီ tool လေးကိုသုံးပီးနောက် မြန်မာစာကို
100% မှန်ကန်စွာ မြင်လာပါတယ်။ကျွန်တော့် Samsung Galaxy S2 plus 4.1.2 တော့
1-Root အရင်လုပ်ပါ။Font Changer နဲ့ Change ပါ။
(Root ပီးသား Font Changer နဲ့ မြန်မာဖောင့်ထည့်ပီးသားဆို လုပ်စရာမလိုပါ)
2-ပီးရင် ဒီ Tool လေးကို ဖုန်းထဲမှာ သွင်းပီး run လိုက်ပါ။ပီးရင် Reboot လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
power ပြန်တက်လာရင် မြန်မာဖောင့်ကို ၁၀၀% မှန်ကန်စွာ မှန်နေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
Sony နဲ့Huawei ဖုန်းအားလုံးလဲ OK ပါတယ်။(စမ်းသပ်ပီး)
ဒီ Tool လေးမသုံးခင် အရေးကြီးတဲ့ Data တွေ Backup လုပ်ထားပါ။
သည် tool လေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့ Dr.Kyaw Zaw Naing ကို Credit ပေးရင်းကျေးဇူးအရမ်း
Post by: Khit TaMhine(www.facebook.com/Khit TaMhine)
Direct Download l Copy l Dropb0x
ပြန်လည်တင်ပြသူ ခေတ်သမိုင်း အချိန် 12:55:00 PM
ခေါင်းစဉ် Android, နည်းပညာ, မြန်မာ ဖောင့်ထည့်နည်း
supranee boonto November 12, 2013 at 5:26 PM
သည် tool လေးကိုဖန်တီးပေးတဲ့ Dr.Kyaw Zaw Naing ကို ရော ကိုအမျိုးကောင်းသား ကိုရော ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါဗျာ......ခုမှပဲမြန်မာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖက်လို့ရတော့တယ်.......note 8.0 N5100 4.1.2 ပါ.......နောက်လူတွေ ရဲရဲ ကြီးလုပ်လိုရပါတယ်......
supranee boonto November 12, 2013 at 5:29 PM
ခေတ်သမိုင်း November 12, 2013 at 8:52 PM
လုံးဝ 100% ok သွားလိမ့်မယ်။Root လုပ်
ထားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာတော့ မမေ့ကြနဲ့ နော်
0973141682 November 12, 2013 at 9:25 PM
aung ye November 12, 2013 at 10:22 PM
အကိုေ၇ LG ဖုန်းမှာ လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်၊၊ ERROR ပြနေတယ်။ ကျွှန်တော်ဖုန်းမှာ FONT STYLE လဲမပါဘူး။ ကူညီပါနော်။
ခေတ်သမိုင်း November 13, 2013 at 11:14 AM
ဘယ်လို error မျိုးလဲ။
No_Su Error လား (ဒါမှမဟုတ်) Patch fail error လား။
No_Su Error က ကိုယ့်ဖုန်းမှာ root မလုပ်
Patch Fail Error ဖြစ်ရင်တော့ နောက်
ထွက်လာမဲ့ Fepfz ဗားရှင်းကိုစောင့်ပါ
Mya Soe November 13, 2013 at 12:32 PM
နောက်ထွက်မယ့် Fepfz ဗားရှင်းအသစ်စောင့်ရတော့မယ်ဗျို့
Anonymous November 20, 2013 at 12:02 AM
ကျွန်တော့ဖုန်း model sony xperia L အရင်က super user သုံးပြီးမြန်မာစာအသုံးပြုတာ webpage အားလုံးမှာ မြန်မာလိုအကုန်ပေါ်ပါတယ် မှန်လည်းမှန်ပါတယ် sms ရေးတဲ့နေရာမှာအမှန်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ဖုန်းက root မလုပ်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတာပါ သိချင်တာက မနေ့က 4.2.2 ဗားရှင်းကို update တောင်းလို့လုပ်လိုက်တော့ webpage ကော မြန်မာလိုအမှန်မပေါ်တော့ဘူး ပြီးတော့ super user ကလည်း out of date ကို install လုပ်တာမရတော့ဘူး root ဘယ်လိုဖောက်ရမှာလဲ
ye ying November 24, 2013 at 12:52 AM
ye ying November 24, 2013 at 12:58 AM
ကူညီပါ sory xperia c root ဘယ်လိုဖောက်ရမှာလဲ မသိလို့ပါ မြန်မာဖောက်လဲ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါ
လေး ဖြု November 25, 2013 at 11:50 PM
အကိုရေ ကူညီပါအုန်းဗျာ ကျွန်တော် ဖုန်းက acer z130 Version 4.2.2 ပါ မြန်မာဖောင့် လုံးဝသွင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် နည်းလမ်းလေးများ ရှိရင် ညွှန်ကြားပြသပေးပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thoon Sic December 3, 2013 at 8:04 PM
Samsung Galaxy S3 4G Lte 4.1.2 OKပီ။ Thank For All.
PPSSPP Game High Compress Terbaru 2016 Full List
Download PPSSPP Gold - PSP Emulator Apk for Android . ဆိုဒ် အသေးဆုံး ဖြစ်အောင် ချူံပီးတင်ထားတာမို့လို့ အဆင်ပြေကျမှာပါ PPSSPP ...
KenBo Fly O21s Flashtools Firmware
အဲကောင်လေးနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာ သုံးလေးလုံးရှိပီ အားလုံးအဆင်ပြေတယ် အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ Free တော့ ဟုတ...
APLUS A300 Firmware
အကို တစ်ယောက်တောင်းထားတာလေးပါ ဗျာ Download>>>> https://drive.google.com/ Pass>>>khaingzawlatt
Best Free Software Downloads for Windows 7
Best Free Software Downloads for Windows7၀င်းဒိုး7အတွက် free ထဲက အကောင်းဆုံးလေးတွေပါ Recommended free AntiVirus software F...
Clash Royale v1.2.3 APK
ဒါကတော့ တော်တော်များများ သိပီးသားပါ Coc ကနေ အသစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဂိမ်း အချင်းချင်းလည်း သမလို့ရတယ်နော် mediafire
Zapya v1.8.3 (CN) Apk 4MB
Internet Download Manager 6.18 Build8 For Pc 6MB
Libon – Voicemail & Free Calls Apk 16MB
Force Of Execution2013 AVI 699 MB
Angel oft he Skies 2013 DVDRip MKV ( 803.8 MB )
Animated Photo Frame Widget Plus v4.7.3 Apk 12MB
The File Converter v4.0 Apk 4MB
Klyph Pro for Facebook v1.2.1 Apk 4MB
Facebook v3.9 Apk 17MB
Battle of the Year 2013.720p BluRay.x264 mp4 800M...
Galleria Software Collage Maker v3.80 For Pc (28 M...
CCleaner Professional Business v4.08.4428 (4 MB)
Aidfile Recovery Software Professional v3.6.4.0 (5...
HD Video Converter Deluxe v5.0.0.Build.20131125 (3...
Windows7Manager v4.3.5 (12 MB)
Evaer Video Recorder for Skype v1.3.11.25 For Win ...
The Hunger Games Catching Fire 2013 MKV 1.5G
Iron Man3v1.4.0r Apk Game 760MB
CyberLink PowerDirector Ultimate 12.0.2230 For Xp ...
SEE RANK Singh Saab the Great (2013) MKV 700MB
IDM fake serial number ပြဿနာ
Cold Eyes 2013 BluRay 720p.x264 mkv 800MB
Marine Aquarium 3.2 PRO v1.07 Premium Live Walppap...
KitKat Launcher Prime 1.4.6 Unlocked Apk 15MB
Windows Doctor v2.7.6.0 For Pc 8MB
iPhone Music - iOS7Music v1.1 Apk 2.5MB
Subway Surfers v1.16.0 Apk Game (29 MB)
Thor: TDW - The Official Game v1.0.0l Apk Game 600...
Anomaly Korea v1.03 Apk Game 290 MB
Happy Mall Story v1.0.4 Unlimited GameFor Android ...
Next Launcher 3D v2.08 Apk 11MB
Download Jobs 2013 720P BluRay × 264 MKV [850MB] +...
Adobe Photoshop CC 14 Portable x86+x64 (300MB)
MRTV4ကို Player ကနေကြည့်မယ်
IObit.Malware.Fighter.P0R v2.2.0.20 (24.93 Mb)
Image Line FL Studio Producer Edition v11.0.4 For ...
Chrome Browser - Google v31.0.1650.59 Final Apk 28...
Taskbar7v1.7 Apk 1.5 MB
Username and Password Updated(KEYS 18.11.2013 )
TwistedBrush Pro Studio v20.06 For Pc 28MB
Download RED (2010) BrRip XviD[700MB]+Engsrt[88Kb]...
Download The Mortal Instruments City of Bones [201...
PicSay Pro - Photo Editor v1.6.10 Apk (1 MB)
KitKat Launcher v1.3.7 Unlocked Prime Android 15M...
Christmas Live Wallpaper Full v3.02 Apk (2 MB)
Firefox Browser for Android v25.0.1 (25 MB)
Advanced Task Manager Pro v4.0.0 Apk 2MB
Ringtone Maker v1.01 Apk (610 KB)
မြန်မာဖောင့် ၁၀၀% မှန်ကန်တဲ့ Fepfz ဗားရှင်း 2.0 ထွ...
Bigasoft Video Downloader Pro v3.0.30.5051 For Pc ...
Wondershare MobileGo for Android 4.1.1.6 For Win 8...
Wondershare MobileGo For iOS v3.3.2.4 (21MB)
Wifi Key Recovery apk For Android
Viber Sticker Pro v1.1 apk For Android (6MB)
Advanced MobileCare v3.4 Apk (7 MB)
Lucky Patcher v3.6.9.1.build.1074 Remove License V...
Ski Safari v1.5.0 Modded_Money Unlocked Shop Items...
Advanced SystemCare Pro 7.0.6.361 Multilanguage | ...
Facebook Messenger v3.1.1 Apk 10MB
instaLyrics v2.0.3 for iPhone/iPod/iPad
Download The Smurfs2(2013) 720P BluRay [800MB] +...
Download Prisoners 2013 720p WEB-DL [1.1GB] + EngS...
Download Marvels Agents of S.H.I.E.L.D 2013 HDTV S...
Machete Kills 2013 (679MB) AVI
၀ယ်ရတဲ့ Viber stickers များ 40MB
Download Getaway  HDRip XViD [699MB]+EngSrt[...
မည့်သည့် Android vesion ကိုမဆို မြန်မာစာ 100% မှန်...
IOS7မှာ Jailbreak လုံးဝမလိုပဲမည်သည့်နေရာတွင်မဆို...
WinRAR v5.01 Beta (4MB)
Mojosoft Photo Calendar Studio 2014 v1.10 For All ...
Ultimate Voice Recorder Pro v2.7.1 Apk (200 kB)
Download The Starving Games 2013 HDRip XviD [717MB...
Download Elysium  Movie အကြည် HDRip XViD [69...
Download Adobe Photoshop Creative Cloud Edition 32...
Viber v4.0.0.1707 For Android 13MB
Magic SmS apk for Android
မြန်မာစာ 100% မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်တဲ့ tool ထွက်ရှိ...
Camera Fv5v1.56 Full Apk 3MB
IDM Internet Download Manager v6.19 Apk 2MB
ခန္ဒီစေတီ ပုတီးစိပ်နည်း Apk
Download The Deadly Game  DVDRip XViD[697MB]...
Download Percy Jackson Sea of Monsters 2013 DVDRip...
Download The Smurfs2(2013) DVDRip XviD [1.37GB] ...
Download The Wolverine  Extended 480p & 1080...
Burn Aware Professional. v6.7.Portable 14MB
WhatsApp Messenger v2.11.125 Apk
Easy Unrar Apk 735KB